3d Printer kofehy, PLA kofehy - Stronghero3D
TPU / malefaka kofehy
3D printy Accessories
Pirinty natao tamin'ny 3D News & Tips
Manaova STRONGHERO3D Series ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) no tonga lafatra na mitambatra tsara sy kofehy takatry printy 3D. Farany, dia tsy mila mpanao hamono zavatra hatao fanatitra tsara tarehy dian mba hamonjy vitsivitsy bucks!
Polyethylene terephthalate (PET) no tena fampiasa plastika eto amin'izao tontolo izao. Fantatra amin'ny anarana hoe ny tsara indrindra ampiasaina amin'ny rano polymer tavoahangy, izany koa hita ao amin'ny akanjo sy ny sakafo kofehy kaontenera. Raha "manta" PET dia zara raha ampiasaina amin'ny 3D fanontam-pirinty, ny Variant PETG dia malaza printy 3D kofehy.
Voalohany indrindra, dia mora ny hanontana amin'ny. PLA manana hafanana ambany noho ny ABS fanontam-pirinty, ka izany no tsy ho tenany toy ny mora, tsy midika izany, tsy nisy fanafanana fandriana. Soa iray hafa ny fampiasana PLA dia tsy manome fofona ratsy intsony mandritra pirinty.
NET Weight 1Pj - fanampiny lanja, mahafinaritra kokoa, hampandeha tsara PRINT- milamina mifono, ketraka tsara, fahana hampandeha tsara sy tsy tapaka tsy clogging ny nozzle na extruder, HIGH fampisehoana - Tsara famolavolana, tsy misy fefy, tsy misy jamming, no warping
View rehetra Works
PLA VX Avana kofehy
PLA tana avana kofehy
Efa tamin'ny taona 2010, no mpisava lalana Stronghero3D 3D fanontam-pirinty any Shina mpamokatra kofehy, teknolojia avo-toeram-piasana, izay misahana manokana ny fikarohana, mpanamboatra sy ny varotra ny kofehy printy 3D. Tsy miankina amin'ny fananana ara-tsaina zo, famantarana Stronghero3D sy RainbowME voasoratra anarana any Etazonia sy Shina, ary ny Patents any Shina. Ny orinasa mandalo ISO 9001: 2015 fanamarinana. ary efa manan-karena traikefa asa maro mpanjifa, dia azo antoka fa hitandrina Eco hanatsara ny tenantsika mba hanome anareo fitaovana faran'izay tsara, ary hitsena ny fepetra.
Adiresy: 3F, N trano, MaoYuan Ind Park, HuanGuan R Atsimo, Guanlan, Shenzhen, Guangdong, Sina
Hatchbox Petg, Printing Petg On Ender 3, Das kofehy Petg, Petg 3d Printer kofehy, Pla Petg, 3d Filament Petg,